Archive du 20170420
PM Solonandrasana Hosamborina ihany koa ?
Hatry ny ela no nalaza tamin�ny resaka kolikoly amin�ny tsenambaro-panjakana ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly OIivier.
Raharaha �Claudine A&C� Tompon�andraikitra feno ny minisitry ny Fitsarana
Tsy mifanalavitra firy amin�ny raharaha Antsakabary nanjo ny minisitry ny polisim-pirenena ny raharaha �Claudine A&C�, hoy ny filohan�ny sendikan�ny mpiraki-draharaha teo aloha Rabenandrasana Nicolas.
Dinika fanonganam-panjakana Tsy nosakanan�ny Emmoreg
Hentitra ny mpitarika ny Tolona Fanorenana Ifotony (TFI), Rasolofo Andr�, ny zoma teo raha nanambara tamin�ny haino aman-jery ampahibemaso fa fitondrana mamoha henatra no misy amin�izao fotoana izao ka mila haongana �amin�ny fomba rehetra�.
Vovonana mampiray Nanao rodobe tany Ivato-Vohipeno
Tonga ny fotoana amin�ny fametrahana ny fanorenana ara-panahy sy ara-moraly eto Madagasikara, hoy ry zareo ao amin�ny � Vovonana Mampiray ny vahoaka malagasy ny fanorenana ifotony sy ny fanarenana an�i Madagasikara � tarihan-dRtoa Arlette Ramaroson mpitsara iraisam-pirenena teo aloha.
Taratasin�i Jean Mody atao hoe�
Miarahaba anao aloha ry Jean tamin�iny vokatra vaovao nampahafantarinao ny mpijerintsika omaly iny� oadray ! Mpamakintsika mantsy e !
Lions Club International Miara-miasa amin�ny fitondrana mifandimby
Nisokatra tamin�ny fomba ofisialy omaly teny amin�ny hotely Carlton Anosy ny kongresy faha-3 n�ny Lions Club District 403 B2; nisolotena ny fitondram-panjakana nandritra ny lanonana ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier,
�Gare routi�re� Andohatapenaka Aorina eo ambony romoromo
Napetraka omaly ny vato fototry ny toeram-piantsonan�ny fiara eny Andohatapenaka izay hivelatra amina velaran-tany 8ha, ka namonoan�ny mpitondra omby mba hanaovana joro mihitsy teny an-toerana.
Fampandrosoana an�Antananarivo Nanao antso avo i Lalao Ravalomanana
Nanomboka omaly 19 aprily 2017 ny 10 andro fivoriana ara-potoanan�ny filankevitra monisipalin�ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Nisantarana azy ny tatitra nataon�ny sekretera jeneraly Razafimahefa Heriniaina mikasika ny asa vitan�ny kaominina tamin�ny taona 2016.
Maty ny afo ?
Toa lany andro amin�ny fanamelohana am-bava sy ny resabe etsy eroa ireo izay manampahefana efa nahavelombolo ny rehetra, fa hijoro sy tsy hanaiky lembenana tamin�ilay raharaha nahasaringotra ilay vehivavy malaza tamin�ny kolikoly.
Kaominina Ambohijanaka Vita soa aman-tsara ny tsena, efa ho vita ihany koa ny lalana
Vita soa aman-tsara ny tsena ao amin�ny kaominina Ambohijanaka, distrikan�Atsimondrano. Omaly no nitafa sy naka ny hetahetan�ireo mpivarotra ao an-toerana ny Ben�ny tanana Alain Ratsimbazafy no sady nijery ny foto-drafitrasa. Mitentina 160 tapitrisa Ar no nanamboarana azy io,
Tsena vaovao etsy Ambodifilao Miandry fitokanana ara-dal�na ireo mpivarotra
Efa iray volana izay, raha ny fanazavan�ny delegen�ny tsena etsy Analakely no nitsanganan�ny tsena vaovao etsy Ambodifilao.
Zaridaina Ampefiloha Hitondra ny anaran�ny Lions Club International
Notokanana omaly Alarobia 19 Aprily ny tsangambaton�ny Lions Club International etsy Ampefiloha. Nomarihana tamin�ny fomba Ofisialy izany tamin�ny alalan�ny lanonana tsotra natrehan�ny Ben�ny Tananan�Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana sy ny fianakaviamben�ny Lions Club International notarihan�ny Governora Distrika 403 B2, Rakotozafy Fidy.